Izinqolobane Zomphakathi - IntoKildare
Izimpahla eziyigugu kakhulu esifundeni sethu ngabantu bethu. Kunenqwaba yamaqembu omphakathi akhombisa ngokuziqhenya okumangalisayo kweKildare.
Bheka amanye amaqembu omphakathi kaKildare bese ubona ukuthi benzani ukugcina uKildare esesimweni esihle samathiphu.
Umjaho Clane Maynooth Naas Kildare Newbridge ICelbridge I-Leixlip
Ngenxa yemikhawulo yeCovid-19, imicimbi eminingi kanye nemisebenzi eKildare kungenzeka ihlehlisiwe noma yamiswa futhi amabhizinisi amaningi nezindawo zingavalwa okwesikhashana. Sincoma ukuthi uhlole amabhizinisi afanele kanye / noma izindawo ukuthola izibuyekezo zakamuva.
I-Ballymore Eustace Art Studio
Iphethwe yiCiko lendawo u-Fiona Barrett, i-Ballymore Eustace Art Studio itholakala ngaphandle nje kwedolobhana elihle lase-Ballymore Eustace e-County Kildare. Izungezwe amasimu, izilwane zasendle nezinkukhu ezihlala kuzo […]
Umjaho wamahhashi e-Ireland
IHorse Racing Ireland (HRI) yisiphathimandla sikazwelonke somjaho ophelele e-Ireland, onesibopho sokuphatha, ukuthuthukisa kanye nokukhuthaza imboni.
Izinsizakalo Zomtapo Wezincwadi waseKildare
Izinsizakalo Zomtapo Wezincwadi zaseKildare zinomtapo wolwazi kuwo wonke amadolobha amakhulu aseKildare futhi zisekela imitapo yolwazi eyi-8 yesikhashana kuyo yonke indawo.
Amadolobha aseMonasterevin Tidy
AmaMonasterevin Tidy Towns ayindawo yomphakathi wasendaweni edolobheni elincane eKildare ekhombisa uthando olumangalisayo esifundeni sabo.
Amadolobha aseNewbridge Tidy
INewbridge Tidy Towns yiqembu lomphakathi elisebenza kanzima ukwenza idolobha libe yindawo ekhanga kakhulu lapho ungahlala khona, usebenze futhi wenze ibhizinisi kuwo.